Viber inozvivandudza pachayo nekuwedzera yega-yekudzima mameseji, akapfuma notisi uye nezvimwe zvakawanda | IPhone nhau
Viber inogadziridza nekuwedzera auto-kudzima mameseji, akapfuma notisi, uye zvimwe zvakawanda
Munyika yekutumira mameseji pane zvinopfuura WhatsApp neTeregiramu, asi iwo ndiwo maficha anozivikanwa kwazvo pasirese, tisingataure nezveFacebook Messenger. Viber ndeimwe yekare kare mameseji mapuratifomu pamwe neWhatsApp. Parizvino ine vanopfuura mamirioni mazana matanhatu evashandisi, kunyanya munyika dzeArabhu, uko WhatsApp isingazivikanwe. Pamusoro pemeseji, Viber inotibvumidza kufona pakati pevashandisi uye kune nharembozha uye nharembozha kutenderera pasirese, kwemakore akati wandei, uri iwo mukwikwidzi wakanyanya weSkype munyika dzeArabhu.
Mutemo mukuru wakaziviswa naDonald Trump svondo rapfuura wakonzera el kuramba makambani mazhinji ehunyanzvi, makambani ayo kunze kwekuratidza kusagadzikana kwavo akaita zvishoma nezvenharaunda yakabatwa. Nekudaro, Viber yakazivisa Muvhuro wapfuura mukana wekufona kwemahara pakati penyika dzinobatanidzwa muhurongwa hwehutongi, kune vashandisi vanogona kusangana nekusingaperi neshamwari dzemhuri.
Asi pamusoro peiri basa rekuzvipira, Viber ichangotanga chirongwa chitsva cheapp yayo yeIOS uye Android ichiwedzera mukana we gadzira machete akavanzika anoparadza zvese zvakanyorwa kana kutumwa zvemukati mushure menguva yakatarwa. Iri basa rakanga ratovepo paTeregiramu sezvazviri kubva pakutanga kwayo. Asi handiyo yega ruzivo.
3D Kubata tekinoroji kwave kuitwawo mune ino yekuvandudza ichipa mukana wekugona tarisa zvirimo zveya machats pasina kutora mazviri. Chekupedzisira, chimwe chitsva icho chikumbiro chakagashirwa ndiko mukana wekutumira mavhidhiyo mameseji anosvika pamasekondi makumi matatu, sarudzo yakafanana chaizvo neiyo inowanikwa kuburikidza neSkype.
Vakomana vanobva kuViber vakawedzerawo tsigiro yeizizi 10 dzakapfuma Pamusoro pekukubvumidza iwe kutumira mavhidhiyo uye mifananidzo mune yavo yekutanga resolution, kudzivirira kutendeuka kwavanoita pane yakaderera resolution, ese mameseji manyorerwo ekuchengetedza pane samu data data.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Viber inogadziridza nekuwedzera auto-kudzima mameseji, akapfuma notisi, uye zvimwe zvakawanda
8x20 podcast: Apple inoputsa zvinyorwa zvakare